EyoMsintsi 11, 2018 admin
Canada lokuqala & ulawulwa kuphela fund uqala Bitcoin
kuqala kulawulwa mali Bitcoin Canada sele unikwe isimo fund ofanayo. Nangona Sec US usasebenza kwi-mali Bitcoin, Canada sele ukwenzile oko imvume Bitcoin fund trust, ekunikeni abatyali owamkelweyo ukwenza utyalo Bitcoin nge umhlalaphantsi lokonga kwaye rhafu imali zabo akhawunti phakathi kwabanye.
abatyali abafanelekayo ukuzuza ubhenciso ku BTC ngokusebenzisa FBC Bitcoin Trust, kodwa ngaphandle kokuba kokuba ukufumana, ivenkile, nokulawula le Bitcoin bha. Marc van der Chijs, i co-ngumseki kunye CIO of Block Okokuqala wathi: "Ngenxa yale mpumelelo, siqhubeka teke Canada phambili njengenkokheli kwihlabathi kwizithuthi mali olulawulwayo blockchain kunye cryptocurrency. Injongo yethu kukuba ukwenza utyalo-mali eklasini lwemali asethi digital ifikeleleke ngakumbi…"Imvumelwano loo exposure rhafu-simahla Bitcoin ngeniso linyathelo elikhulu ngokwenene ukuze crypto.
izilingo NASDAQ isixhobo esitsha ukuqikelela intshukumo ixabiso crypto
NASDAQ sibe basecicini ngokunika abatyali zamaziko emphethweni yohlalutyo kumakhulu ukurhweba-asethi crypto. Ngokutsho komnye umntu oqhelekileyo kunye nezicwangciso zenkampani, i US stock exchange lunghiselela ukongeza izixhobo yokuqikelela intshukumo ixabiso asethi crypto ukuya nokuhlaziya Hub yayo. le hub, nyakenye, lutsala ekufundeni umatshini kunye processing kweelwimi zemveli (NLP) ubunakho zecomputer ukubonisa ngokusebenzisa amajelo zentlalo kunye eminye imithombo yedatha ukunika abatyali indlela engcono ukuhlola intshukumo kwimarike.
Ukuya kumhla, Izibalo Hub ijolise kwi-asethi zemveli, kodwa ukongeza crypto kubonakala ukuba omnye umqondiso umdla ekhula Wall Street ngayo kwicandelo lutsha. Bill Dague, intloko NASDAQ ngayo data ezizezinye, wathi “banikwe ngobuninzi umdla, sisajongisisa zogcino- ezinxulumene cryptocurrency.” lo mthombo, ngubani ukusebenza NASDAQ kwi umzamo, kwaba sibambene, esithi ukuba usebenziso crypto omtsha njengangoku beta kuvavanywe ngaphambi a sungula ekujoliswe ngoNovemba. Le nkonzo iza kunika nemibiko kwezinye 500 impahla crypto, kwaye oko kuthatha indlela emazinyo mathathu kohlalutyo yayo, ujonge kwi fund aphumela nge izipaji, data evela ukutshintshiselana kwimidiya yomphakathi. “Kukho eendaba imizwa inxenye loluntu, ngoko ukusebenzisa ukufunda machine and NLP, leyo eza kuqala Twitter yaye inokuquka StockTwits waza ekugqibeleni mhlawumbi Reddit,” lo mthombo.
IMF icebisa nxamnye crypto uthando ngokusemthethweni kwiziqithi Marshall
I-International Monetary Fund iye wacebisa nxamnye Republic of the Marshall Islands’ uceba ukwazisa yelizwe digital ithenda yesibini ngokusemthethweni ecaleni kwe US ​​dollar. I-Marshall Islands - nomxokelelwane ekwanti iziqithi umbindi Pacific - badlula umthetho ngalo mba in February, uzimisele kuhlelwa i “iNkosi” cryptocurrency sokuxhasa kuqoqosho lwengingqi kwaye baveza imingcipheko ukwandisa yesizwe yokosulelwa luqhawulwe evela kwinkqubo zemali ehlabathini jikelele.
kunjalo, kulandela ithuba thethwano kunye namagosa asuka kwiziqithi, i-IMF lapapasha iphepha ngoMvulo iingcebiso nxamnye kuthuthelwa. Ngokutsho iphepha, i Marshall Islands kuqoqosho ngoku “buxhomekeke kakhulu” ngaphantsi koncedo lwangaphandle, njengoko eli lizwe lijongene utshintsho lwemozulu rhoqo kunye neentlekele zemvelo. Ibhanki yasekhaya yorhwebo kuphela kweli lizwe ngoku “sengozini yokulahlekelwa lokugqibela US dollar umbhaleli ulwalamano zalo zokubhankisha kwibhanki US-based,” ngenxa liqiniswe ngenyameko ngenxa kuzo kumaziko zemali U.S.
Ingxelo Daily Market Kraken for 10.09.2018
$99.7M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Blockchain News 16 EyoMqungu 201...
Bitcoin Analysis Technical - B ...